Senator Keith Ellison oo bilaabay inuu u doodo xawaaladaha Soomaalida ee Mareykanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Senator Keith Ellison oo laga soo doorto degmada 5-aad ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo Soomaalidu ay ku badan tahay, oo ka hor hadlayay golaha Congreska dalkaas ayaa ugu baaqay Dowladda Mareykanka in ay ka laabato go’aanka lagu xiray xawaaladaha Soomaaliya ee dalkaasi laga xayiray taasi oo caqabad ku noqon doonto haddii ay dhaqan gasho xayiraada Mareykanka uu ku soo rogay xawaaladaha.
Senator Keith Ellison ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u soo gudbiyeen caqabad soo wajahday oo sabab u ah xiritaanka la xiray xawaaladaha oo ku tiirsaneyd malaayiin dad Soomaali ah oo ku nool dalka gudihiisa oo biil ahaan loogu soo diri jiray, wuxuuna sidaasi daraadeed uu ku baaqay in si deg deg ah Dowladda Mareykanka ay dib ugu laabato go’aankaasi.
Ninkani ka tirsan Congreska Mareykanka oo sii hadlay ayaa sheegay in lacagta dadka Soomaaliyeed ay biil ahaan u soo diraan lagu qiyaasay lacag dhan 215 Milyan halka Dowladda Mareykanka macaawino ahaan dalka Ay u siiso 200 Milyan oo Dolar taasi oo ka badan lacagta Soomaalida ay u soo diraan dalka wuxuuna sheegay in taasi ay cadeyneyso sida dadka Soomaaliyeed ay ugu tiirsanyihiin lacagahaasi.
Hadalka Senetarkani ayaa imaanaya xili 6-dii bishan Dowladda Mareykanka ay joojisay xawaaladaha dadka Soomaaliyeed ay lacagaha ku dirsanayeen taasi oo caqabad ku ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka.
Ciidamada dowladda oo dagaal rogaal celin ah ku qaaday Guriceel